Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 2, 2020 21: 29 Awekho amazwana
Kunoma yikuphi, imboni iyaqhubeka nokusungula kule ndawo: abezimboni bavele bafaka imishini yezocansi emakethe imishini entsha, imishini entsha, ciyikhondomu yabesilisa. Le khondomu iqoqo lezingubo zangaphansi ezinezimbobo ezihlanganisa ubudoda.
Ikhondomu entsha okukhulunywa ngayo ingahle inikeze ithuba lokuvikela ukuvikeleka kwezingxenye ezisondelene zabalingani (labo abenza uthando). Kungakuqinisa kakhulu ukwedlula okwedlule, cyizindaba ezimnandi zabesilisa abangochwepheshe kwezocansi. Kuzovumela uchwepheshe ongcono kakhulu ukuba aqhamuke nabanqobi ngokuya ngocansi… Lol !
Labo, abaphila ngaphandle kokwazi umlando wabo, abaphili ngokoqobo (baphila), ngoba benza sengathi baphila "Abakwazi ukubhekana nomdlalo omkhulu wokuphila" Basesihawukelweni sabanye noma kubo bonke maniplication bahlukaniswe empilweni